Xildhibaan sheegay iney Guddoonka Golaha Shacabku wali isku mari la’yihiin arrinta Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Xildhibaan Cali Jowhar, oo ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa u sheegay Kalfadhi iney Guddoonka Golaha Shacabku wali isku hayaan arrinta Guddiga Maaliyadda, oo ay labada Kuxigeen aaminsanaayeen iney kala direen, Guddoomiyuhuna u fasaxay inuu shaqeeyo. “Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Kuxigeennadiisa si sax ah uguma hishiis sida laga yeelaayo Guddiga Maaliyadda” ayuu Xildhibaan Cali Jowhar ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in Xildhibaannadii xaliyey khilaafkii Guddoonka Golaha ay ka fekereen uun isu soo dumidda hogaanka Golaha, hase waxa uu sheegay iney gudbooneyd in marka hore leysla meel dhigo wixii leysku qabtay. “Waxay ahayd in marka hore laga hishiiyo arrinta Guddiga Maaliyadda, inta lagu mashquuli lahaa Mooshin iyo Khilaaf Guddoonka dhexdiisa ah” ayuu yiri Xildhibaan Cali Jowhar.
Arrintaas darteed ayuu sheegay Xildhibaanku iney keeneyso inuu Goluhu kulmi waayo todobaadkan. “Waxay ahayd in ay kulmaan Guddiga Joogtada ah, si ay u diyaariyaan Ajandaha Golaha Shacabka la hor geynayo, laakiin wax kulan ah looma jeedo” ayuu yiri Xildhibaan Cali Jowhar.
Waxaa hadalka Xildhibaanka tiir u noqon kara in waxa ugu weyn ee khilaafkii wajiyada badnaa ee taagnaa lagu xaliyey ay ahayd uun inuu Mooshinkii buray, hase ahaatee aan lagu nuux-nuuxsan arrimaha kale, sida arrinta Guddiga Maaliyadda iyo War-bixintoodii Miisaaniyadda 2018-ka ee la laalay iyo arrintii Doorashada Baydhabo, oo uu Guddoomiyaha Golaha Shacabku uga xumaaday sida ay Xukumaaddu u wajahday.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa hor yaala hindise sharciyeedyo badan, oo qaarna u baahan in laga doodo qaarna laga dooday oo ay meel marin uun u harsan tahay, iyadoo ay jiraan hindisayaal u baahan in Golaha la hor geeyo, kuwaas oo qaarkood ka soo dhamaaday gacanta xukumadda. Laakiin, wax shaqa ah kama socoto Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo ilaa 25-kii bishii hore hal mar uun kulmay.